रोल्पाकाे मानिमारेमा मारिएका सहिद ‘सुनील’ र त्याे दिनलार्इ विप्लवले यसरी सम्झन्छन्
लेखकः नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’
फागुन १९, काठमाण्डौँ ।
त्यो दिन हाम्रा आँखाबाट धेरै आँशु बगे । आफैंलाई थाम्न भारी परिरहेको बेला कमरेड वागमती थापाको वियोग र आँशुले हामीलाई झ्न अथाह वेदनामा डुबाइदियो । हामी निकै भावुक बन्यौं । धेरै दिनसम्म हाम्रा आँशुहरू रोकिएनन् ।
युद्धमा यस्तो पनि हुन्छ । जनमुक्ति सेना नेपालको प्रथम डिभिजन घोषणा गर्ने दिन कमरेड सुनील उद्घोषक हुनुहुन्थ्यो । रोल्पा मानिमारेको ठूलो चौरमा प्रथम डिभिजनका योद्धाहरू आ–आफ्नो फर्मेसनबद्ध लाइनमा बसेका थिए । अतिथिमा म, पासाङ, सुदर्शन थियौं । डिभिजनको नयाँ फर्मेसन घोषणा भयो । मैले नयाँ कमान्डरमा कमरेड सुनील छानिएको जानकारी गराउँदै जनमुक्ति सेनाका कमरेडहरूलाई बधाई र शुभकामना दिएँ । साथै, पार्टीको नयाँ कार्ययोजना प्रत्याक्रमणतिर बढेको पनि बताएँ ।
‘चौरमा हान, जङ्गलमा हान, घरमा लन्चर हान, त्यहाँ छन् आतङ्ककारीहरू, ठीक छ, राम्रो हानिस्… ।’ जासुस विमानले हेलीलाई कमान्ड गरिरह्यो । हामी बसेकै घर वरिपरि, नजिकै गोली वर्षिए, हाम्रो सुरक्षामा खटिएका एउटा कमरेडलाई झन्डै गोली लाग्यो । महिला कमरेडले मलाई ढोकानजिक नबस्न सल्लाह दिनुभयो । हाम्रो घरलाई निशाना गरेर लन्चर हान्न थालेको भन्दै सूचकले घर छोड्न आग्रह गरे । हामी सोच्दै थियौं, लन्चरको सेल नजिकै खसिहाल्यो । हामी निस्किएर जङ्गलतिर लाग्यौं । बाटोमा सल्यानका सचिव कमरेड दर्शन आएर कमरेड सुनीललाई गोली लागेको, स्थिति बुझ्न नसकेको सूचना दिनुभयो । हामी झस्कियौं ।
एकैछिनमा क. जटिललाई पनि पेटमा गोली लागेर गम्भीर भएको जानकारी आयो । म र सुदर्शनजी उभिएका थियौं, विद्यार्थी भाइ आएर क. सुनीलको स्थिति गोली लागेर जटिल भएको सुनाए । मैले सोधिहालें, ‘गोली कहाँ लागेको छ ?’ भनेर । विद्यार्थी भाइले जानकारी दिए, ‘निधार र टाउकोमा लागेको छ, बेहोस हुनुहन्छ ।’ हामीलाई अवस्था सोचेभन्दा जटिल छ भन्ने लाग्यो र उहाँ भएतिर लाग्यौं । त्यतिबेलासम्म डाक्टरहरू पुगिसक्नुभएको रहेछ । सबै कमरेडहरू चिन्तित र अँध्यारो मुहारमा हुनुहन्थ्यो । उहाँको सुरक्षा स्टाफ कमरेडहरू निकै भावुक हुँदै रोइरहनु भएको थियो । एकजना सरुण भन्ने कमरेडले आफूलाई बन्दुक दिन आग्रह गर्दै आक्रोशित रूपमा भन्दै थिए, ‘मलाई बन्दुक दिनुस्, म लड्न चाहन्छु, दुश्मनसँग लड्न चाहन्छु ।’
कमरेड वागमती थापा, क. सुनीलकी जीवनसाथी पनि त्यतै हुनुहुन्थ्यो । तर, गोली लागेको ठाउँमा होइन । उहाँलाई कसरी सम्झाउने र संयम गराउने ! हामीलाई गाह्रो भयो । केही कमरेडहरूले भने, ‘जानकारी नै नदिऊँ’ । कसैले ‘भोलि जानकारी दिऊँ’ भने । तर, हामीले निर्णय ग¥यौं, आजै दिऊँ र क. सुनील तथा जटिललाई आजै दाहसंस्कार गरौं । भोलि फेरि अर्को लडाइँ भई नै हाल्ने छ । हामी वागमती कमरेडलाई भेट्न गयौं । धेरै साथीहरू रोएको र हामी उहाँलाई भेट्न गएपछि त उहाँले अनुमान लगाइसक्नु भएछ । भेट्नासाथ हामी धेरै जना रोकिनै सकेनौं । म त झन् बगिहालें । उहाँले यति भन्नुभयो, ‘सर उहाँ हुनुहुन्न त ?’ पासाङले ‘माफ गर्नुस् म्याडम ! क. सुनीललाई गोली लाग्यो, हामीले बचाउन सकेनौं, उहाँ सहिद हुनुभयो’ भन्नुभयो । म त बोल्न पनि सकिनँ ।
वागमती म्याडमसहित हात पक्डेर हामी निकैबेर रोयौं । क. सुनील, जो सहिद भइसक्नु भएको थियो, उहाँ भएको ठाउँमा पुग्यौं । सहिद सुनीललाई देख्नासाथ क. वागमती निकै भावविह्वल हुनुभयो । हामीले केही न केही सम्झायौं । तर, उहाँलाई निकै गाह्रो भयो । हुन पनि वागमती थापा यस्ती कमरेड हुनुहुन्छ, जसले छोरा, ज्वाइँ, भान्जा जनयुद्धमा गुमाइसक्नु भएको थियो । उहाँ आफैं र छोरी दिव्यजोति पुलिसबाट गिरफ्तार भई बलात्कारको सिकार समेत हुनुभएको थियो । आज क. सुनीललाई समेत गुमाउनु भएको छ । कति ताप र बेहाल होला ! कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ । त्यस बेला मैले भनेको थिएँ, ‘म्याडम ! हामी बाँचेसम्म सँगै हुने छौं र नजितेसम्म लडिरहने छौं ।’ बल्लबल्ल उहाँ सह्मालिनुभयो । उहाँप्रति गौरव गरिरहन मन लाग्यो ।
हामीले कुनै कमी नगरी तयारी पूरा ग¥यौं । हामीले नयाँ रिक्रुट, लजिस्टिक, ड्राइफुड, स्वयम्सेवक, आर्थिक– सबै तयार पा¥यौं । र, फर्मेसनको घोषणामा जुट्यौं । फर्मेसन घोषणा पनि गरिभ्यायौं । हाम्रो आधारइलाकाको सोचाइ थियो कि क. सुनीलहरू डिभिजन लिएर गण्डक जानुअघि एकपटक आधारइलाका अन्तर्गतका पाँच जिल्लामा लोकतान्त्रिक जनसभाहरू गर्ने । क. सुनीलले पहिलो लडाइँको कमान्ड समालिसक्नु भयो । अपसोचको कुरा ! आफ्नो फर्मेसनलाई पङ्क्तिबद्ध बनाउन सफल भए पनि सो पङ्क्तिलाई लिएर पूरा नेतृत्व गर्न नपाउँदै सहिद हुनुभयो । उहाँ सहिद भएपछि हामीले नयाँ डिभिजन कमान्डरमा क. सरदलाई नियुक्त ग¥यौं र लोकतान्त्रिक सभासँगै क. सुनीलका स्मृतिसभाहरू पनि ग¥यौं । हामी रोल्पा, रुकुम, सल्यान, दाङ, प्यूठान सबैतिर पुग्यांै । त्यतिबेलै हो, वुद्धिजीवी खगेन्द्र संग्रौला, हरि रोका आदि र थुप्रै पत्रकारहरू काठमाडाैँ बाट आधारइलाकामा भाषण गर्न आइपुगेका थिए ।